၁၀တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ အပိုင်း ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ၁၀တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ အပိုင်း ၁
manawphyu lay has written 939 post in this Website..
ကျမလည်း ၁၀တန်းအောင်ပြီးတော့ ဘယ်လိုင်းတက်ရမှန်းမသိ
ဆေးလိုင်းလည်း အနားတောင်မကပ်နိုင် (အမှတ်ကတော်တော်ကောင်းဆိုတော့ :mrgreen:)
အင်း……ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာဝါသနာပါမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး
ဟဲ့ ..ဘယ့်နှယ့် ကျုပ် အထုပ် ကို လာဖြည်နေရတာတုန်း …
အစထဲက ပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိ မရှိပြမထားဘူးလား
မျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့ စောင့်နေရင်း အကျိုးနည်းပေ့ါ ဟိ
သြော် ပန်ပန်ရေ………. ဘ၀တူတွေပါလားနော်။ ၀ါသနာပါခဲ့တာတော့ တစ်ခု။ ဖြစ်လာတာက တခြား။ တကယ်ကို ဘာမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့လည်း ပန်ပန်ပြောသလို ၀ါသနာမပါလည်း အတင်းဝါသနာပါအောင်လုပ်နေရပါတယ်။ သြော်……………. ဘ၀ ဘ၀………………
ဟုတ်တယ် အစ်မရေ။ ဒီခေတ်က ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာကျတော့လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက မသေချာ။ အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ သင်ရမယ့်ပညာကျတော့လည်း ရွှေအိုးရှိမှ ပညာရ ဖြစ်နေတယ်။
အစ်မပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မွန်မွန် တက္ကသိုလ်ကို ရွေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို ရေးဖို့ ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။
မမ မနော ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာက တက်စရာတွေကလည်း အစိုးရတက္ကသိုလ်တင်မကဘူး။ အပြင်ကျောင်းတွေကလည်း အများကြီးဆိုတော့ ရွေးစရာတွေ တကယ်ကိုပေါတာပါ။ ငြိမ်းရဲ့ ညီမလေးလည်း ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်တာဆိုတော့ ၀ါသနာပါတာကို အရင်သိအောင်လုပ်ပြီးမှ တက်မယ့်ကျောင်းကို ရွေးဆိုပြီး ပြောရပါတယ်။ ကိုယ့်ဝါသနာပါတာကိုလုပ်မှ ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်ထင်လို့ ငြိမ်းကတော့ ထင်တယ်။ မမ မနော ထပ်ရေးမယ့် စာကိုလည်း မျှော်နေတယ်နော်။
၀ါသနာနဲ.ပတ်သတ်လို.ကြည်.ခဲ့ဖူးတဲ့3iodiods ဆိုတဲ့ကားလေးသတိရမိတယ်….
လတ်လတ်ရေ… အောက်ခမြင့်လေးကို မှန်အောင်လေး လေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်။ အောက်ခမြင့်ရှိတဲ့နေရာတွေက H, Shift+Y, Shift+U သုံးခုထဲက သင့်တော်တာကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ရှင်။
အစ်မ မနောရေ …
ကိုယ်တိုင်လည်း ဆယ်တန်းတက်ခဲ့ရဖူးပါတယ် …. ကိုယ်ဖြေခဲ့တာ ကိုယ်သိပါတယ် ။ ကိုယ်အသုံးမကျတာလည်း ကိုယ်သိတာမို့ …. ဆယ်တန်း အောင်စာရင်းထွက်တော့ မျောက်မီးခဲကိုင်မိသလို ပြာကလပ်စိန်ဖြစ်မနေပါဘူး ။ ရင်လည်း မခုန်ပါဘူး .. .ကျမယ်မထင်ပါဘူး … ဂုဏ်ထူးတွေ ဘာသာစုံထွက်မယ်လို့လည်း …. စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ပါဘူး .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးမို့ပါ … ။
အရင်ခေတ်က ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့်.. ဒီခေတ်မှာတော့ ..ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ ဆိုတာ ..ဒီလောက်ကြီး မခက်ခဲပါဘူး … ။ အရင်ခေတ်ကဆို ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီး ဆယ်တန်းအောင်လျှင်တောင် … အေနဲ့လား ဘီနဲ့လား ဆိုတာမျိုး ခွဲထားခဲ့ကြတယ် … ။ အဲ့ဒါကလည်း .. စာသင်ကြားတဲ့ စနစ်ပေါ် မူတည်တယ်ထင်တယ် … ။ စာသင်တဲ့စနစ်မကောင်းလို့ ဆိုပြီး ..မ ဝေဖန်ရက်ပါဘူး ..စာသင်စနစ်တွေ တကယ်ကိုပဲ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ စာသင်တာက သင်တာပါပဲ .. ကျောင်းသား နားထဲကို 100%ပြန်စွဲသွားမလား .. 50%ပဲ ရမလား 1% ကျန်မလား ဆိုတာကတော့ နာယူသူရဲ့ ပေါ်မှာလည်း မူတည်နေပါသေးတယ် ။ ဆရာနဲ့ မိဘတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုက ဒီအချိန်မှာ အရေးပါလာပါပြီ ။
အရင်ခေတ်ကတော့ ကျူရှင်ဆိုတာမျိုး အတော်ရှားပါတယ် ။ ကျောင်းမှာ တာဝန်ကျဆရာမက သင်ကြားတဲ့အပေါ် လိုက်ပြီး ပညာဆည်းပူးရတာမျိုးပေါ့ ။ စာသင်ကောင်းတဲ့ဆရာရှိသလို စာသင်မကောင်းတဲ့ ဆရာလည်းရှိတယ် .. တာဝန်ကျရာဆရာနဲ့ သင်ရတာမို့ဆရာ့ဘက်ကလည်း နားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ချင်မှ ရှင်းပြနိုင်မယ် ..တပည့်ကလည်း ..စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီး… မှတ်သားတာမို့ … စာသင်ပြကောင်းတဲ့ဆရာနဲ့ မကျတဲ့လူတွေအတွက်တော့ … နစ်နာတာပေါ့လေ … ။ အပြင်ကျူရှင်လည်း မရှိပဲ … အစ်ကို ၊ အစ်မတွေ ၊ တတ်ကျွမ်းသူတွေက သင်ပေးတဲ့အပေါ်လိုက်လုပ်ရတာမျိုး ။ ဒီခေတ်မှာတော့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ အတော်ရှိနေပါပြီ … ကိုယ့်ကလေးဘက်ကသာ ဥာဏ်မှီပါစေ ၊ စာသင်ချင်စိတ်ရှိပါစေ ၊နာယူလိုစိတ်ရှိပါစေ ၊ ၀ိုင်းကောင်းကောင်းမှာ ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့ ထားပြီး စာမေးပွဲဝင်ဖြေလို့ ရနိုင်တာမျိုးလေ …. ။ ဒါကြောင့် ဆရာနဲ့ မိဘတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မ၊ှု အားလည်း လိုသေးတယ်လို့ပြောတာ …. ။
ဒုတိယအပိုင်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုအကြောင်းလေး ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားပုံလေး .. လာရေးပါဦးမယ် .. အခုတော့ … နားဦးမယ်
စာလုံးပေါင်းမှားခြင်း သီးခံပါ … အဟိ … ။
နှလုံးသားနဲ့တွေးတုန်း လက်ကရိုက်ရတာမို့ ၊ ဦးနှောက်က စပယ်လင် မစစ်နိုင်တော့လို့ … ကြို သတိပေးထားတာပါ … အဟိ
ဟုတ်ပါတယ်။ ညီမလေးရေ… လူတိုင်းက ဒီလိုအတွေးလေးတွေ မရှိကြပါဘူး။ ကံကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ပုံချကြတာ အများဆုံးပါပဲ။ မမတုန်းကတော့ အိမ်မှာ စာကျက်ချိန်နည်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်စာပေးလည်း မုန့်စားဆင်းချိန်လေးကို အလုအယက်လုပ်ပြီး ဆရာမကို ပြခဲ့တာကိုး။ နောက် ကျက်စာပေးလည်း ကျောင်းမှာတင်အပြီးကျက်တယ်။ ဒါကြောင့် ၁၀ တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့ပြီး မျက်နှာက မှင်သေသေနဲ့ အိမ်ကို ပြန်လာတော့ အိမ်ကနေ လူကြီးတွေက စီးပြီး လှမ်းပြောတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ကျပြီမလား။ ပြောသားပဲ သွားမကြည့်ပါနဲ့ဆိုတာကို သွားကြည့်တာကိုတဲ့လေ.. အဲလို အပြောခံခဲ့ရတဲ့ဘ၀တွေပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ၀ါသနာပါရာလိုင်းကို ယူခဲ့တဲ့အတွက် နောင်တတော့ မရရှိခဲ့သလို ခုချိန်ထိလည်း သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေ လျှောက်နေခဲ့ပါတယ်။ မနောကတော့ ခေါင်းနည်းနည်းမာတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ။ သူများက ဘာဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ခုခေတ်တော့ ခေတ်ကောင်းလို့ပဲ ပြောရမလား ရွေးချယ်ခွင့်တွေ အများကြီးရနေသလို ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းလို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
စနိုးလည်းတကယ်ကို ၁၀တန်းသာ အောင်တာ အမှတ်စာရင်းထွက်ပြီးချိန်ထိ ဘာတက်ချင်မှန်းကိုမသိဘူး အမှတ်ကလည်းနည်းတယ်လေ ဒါကြောင့် လည်းရိုးရိုးမေဂျာလေးနဲ့ဘဲ ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ ရခဲ့တယ် လေ နောက်ပိုင်း လူငယ်လေးတွေကိုပြောချင်တာက စနိုးတို့လိုအမှားမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်တယ် ကြိုးစားစေချင်တယ် ခုနှစ်စတက်ထဲက bioသမားတွေဆို ဆေးကျောင်းတက်မယ်ပေါ့ ရတာမရတာ ကနောက်မှ စထဲက ဆေးကျောင်းဆိုပြီးကြိုးစားမှ GTCလောက်ရတာလေဒူးလောက် တင်မှ ရင်လောက်ကျန်မှာလေ ကြိုးစားကျပါ လို့အကြံပြုပါတယ် မောင်ညီမလေးတို့ကြိုးစားကျပါလို့ .။။
၁၀ တန်းအောင်ရင် နွားကျောင်းမယ်
ဆယ်တန်းထိကို အရှုံးမရှိအအောင်စနစ်နဲ့ တက်လာသူကျောင်းသူားများကို
စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေပဲမက်ခဲ့ပြီးမိဘတွေချပေးတဲ့ လမ်းကြောင်းအပေါ်သွားခဲ့ကြရတာများပါတယ် ။ လောကအကြောင်းကို သိပ်မသိသေးတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးလို့ပါပဲ ။
မယမင်းအေး လား ?? နာမည်ရင်းကလဲလှတာပဲ နော်
Read more: ၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A655154&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz1zwIoL03o
ရူးတိုးတိုး ညီမလေး နာမည်ရင်းကို သူများကို ပြောရဘူးလေ… ဒုက္ခ… နှစ်ခုစလုံးသိသွားတော့… ဘာနဲ့ဆက်ရေးရပါ့…